တပ်မ တပ်များ တိုက်ပွဲဝင် မွမ်းမံသင်တန်းများ လေ့ကျင့်ပြင်ဆင် လျက်ရှိ A financial Safety Net payday loan Haveahistory of poor borrowing
ပင်မနေရာ အထူးသတင်း တပ်မ တပ်များ တိုက်ပွဲဝင် မွမ်းမံသင်တန်းများ လေ့ကျင့်ပြင်ဆင် လျက်ရှိ ပင်မနေရာ ကလောင်ရှင် အထူးသတင်း ကြားဖြတ်သတင်း မူဝါဒ/ဥပဒေဥပဒေ မူဝါဒ အမိန့် ကြေညာချက် သုတေသန တပ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး VOA အသံလွှင့်ချက် DVB အသံလွှင့်ချက် စစ်ရာဇ၀တ်မှု စစ်အင်အားဇာခန်းဆီးနောက်ကွယ်မှ ဇာတ်လမ်း သင်္ခါရတရားနှင့်စစ်အာဏာရှင် စစ်အာဏာရှင်ကြီး၏အတွင်းရေး စစ်အင်အား ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းစက်ရုံများ စစ်ယာဉ်များ အထူးကဏ္ဍကလေးစစ်သား စစ်သားအခွင့်အရေး အဂတိလိုက်စားမှု ပြည်တွင်းသင်တန်း ပြည်ပသင်တန်း သွေးစကားဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ကိုယ်တွေ့ တိုက်ပွဲ တပ်တွင်းဆင်းရဲကျပ်တည်းမှု အိတ်ဖွင့်ပေးစာ Skip to content
ပင်မနေရာ အထူးသတင်း တပ်မ တပ်များ တိုက်ပွဲဝင် မွမ်းမံသင်တန်းများ လေ့ကျင့်ပြင်ဆင် လျက်ရှိ တပ်မ တပ်များ တိုက်ပွဲဝင် မွမ်းမံသင်တန်းများ လေ့ကျင့်ပြင်ဆင် လျက်ရှိ Friday, 02 December 2011 11:21	User Rating: / 7
PoorBest ??????????? ??????????????????????? ?????????????????????????????
တပ်မတော် လက်အောက်ရှိ တပ်မ တပ်များဟာ တပ်မအဆင့် တိုက်ပွဲဝင် မွမ်းမံသင်တန်းများ လေ့ကျင့်လျက် စစ်ရေးအတွက် လိုအပ်က ထိုးစစ်မှာ အသုံးပြုရန် အသင့်ပြင်ဆင်လျက် ရှိနေကြောင်း ပြည်တွင်းရှိ စစ်ဘက်နီးစပ်သူများက စည်းလုံးခြင်းရဲ့အင်အား ဝက်ဘ်ဆိုဒ်သို့ သတင်းပေးပို့လာပါတယ်။ တပ်မတော်ရဲ့ (ကြည်း) တပ် W.E ဖွဲ့စည်းပုံအရ တပ်မ တပ်များနဲ့ တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် လက်အောက်ခံ တပ်များဆိုပြီး နှစ်မျိုး ရှိပါတယ်။ တပ်မ တပ်များဟာ ကက(ကြည်း)ရဲ့ တိုက်ရိုက်ကွပ်ကဲမှုအောက်မှာ ရှိပြီး နယ်မြေဂွင်ပိုင်မရှိဘဲ စစ်ဆင်ရေးအရ အရေးကြီးလိုအပ်တဲ့ စခန်းသိမ်း တိုက်ပွဲတွေမှာ အသုံးပြုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် လက်အောက်ခံ တပ်များဟာဆိုရင် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် ဧရိယာအတွင်း နယ်မြေ ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ရန်သူစခန်းများရှိပါက နယ်မြေရှင်းလင်းအရေးအတွက် အသုံးပြုတာ များပါတယ်။ တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် လက်အောက်ခံ တပ်များအပြင် (ဒကစ) လို့ခေါ်တဲ့ ဒေသကွပ်ကဲမှု စစ်ဌာနချုပ်လက်အောက်ခံ တပ်များ ဆိုပြီး ရှိနေသေးရာ အဲဒီတပ်ရင်းများရဲ့ သဘောသဘာဝဟာလည်း တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လက်အောက်ခံ တပ်များနဲ့ အတူတူဖြစ်ပါတယ်။ (ဒကစ) တပ်များဟာ တိုင်းမှူးရဲ့လက်အောက်ခံ ကွပ်ကဲမှုအတွင်းမှာ ရှိပါတယ်။
၂၀၁၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင်း ကက(ကြည်း)မှ တပ်မအဆင့် တိုက်ပွဲဝင် မွမ်းမံသင်တန်းများ လေ့ကျင့်ပြုလုပ်သွားရန် အောက်ပါတပ်များအား ညွှန်ကြားခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်….တပ်မ(၄၄) နည်းဗျူဟာ သုံးခုနဲ့ တပ်ရင်း (၁၀) ရင်း ကျိုက်ထိုမှ အုတ်တွင်းသို့၎င်း၊ တပ်မ (၅၅) နည်းဗျူဟာသုံးခုနှင့် တပ်ရင်း (၁၀) ရင်းဟာ ကလောမှ မိုးစွေသို့၎င်း၊ စကခ (၁၄)တပ်မဌာနချုပ်နဲ့ နည်းဗျူဟာ တစ်ခုနှင့် တပ်ရင်း (၅) ရင်းဟာ မိုင်းဆတ်မှ ကျိုင်းတုံသို့ ၎င်း၊ စကခ (၁၉) တပ်မဌာနချုပ်နဲ့ နည်းဗျူဟာ နှစ်ခု တပ်ရင်း (၈) ရင်းဟာ ရေးမှ ဝဲကလိသို့၎င်း၊စကခ (၂၀) တပ်မဌာနချုပ်နဲ့ နည်းဗျူဟာ သုံးခု တပ်ရင်း (၁၀) ရင်းဟာ ခမောက်ကြီးမှ ပုလဲ၊ ပလောက်သို့၎င်း အသီးသီး လေ့ကျင့်ဖို့ ထွက်ခွာသွားပြီဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိပါတယ်။
၁၉၉၆/ ၁၉၉၇ ခုနှစ်တုံးက တပ်မတော် (ကြည်း/ ရေ/လေ) ပူးပေါင်းစစ်ဆင်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းကို ပုသိမ်မြို့နယ် သာပေါင်းမြို့ လှေကြီးတက်မှာ တပ်မ ၅ ခု လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ခဲ့တဲ့ အစဉ်အလာရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခဲ့ပြီးနောက် အဲဒီတပ်မများဟာ မိခင်ဒေသနောက်တန်း တပ်မဌာနချုပ်များသို့ ပြန်ခွင့်မပြုတော့ဘဲ ကရင်ပြည်နယ် စစ်ဆင်ရေး ရုတ်တရက်ထိုးလိုက်လို့ K.N.U အငိုက်မိကာ အခိုင်အမာ စခန်းကြီးများ ကျရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ တပ်မ (၄၄) နှင့် ပတ်သက်ပြီး ပြည်တွင်းမှ တပ်မတော် အရာရှိတစ်ဦးက အောက်ပါအတိုင်း မှတ်ချက်ပြုပါတယ်။
“တပ်မ (၄၄) ဟာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ တပ်မမှူးဘဝဖြစ်ခဲ့တုံးက တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ တပ်မဖြစ်ခဲ့လို့ ကရင်ပြည်နယ် စစ်ဆင်ရေးအတွင်းမှ ဆွဲထုတ်တာ အံ့သြတယ်ဗျာ။ အုတ်တွင်းဆိုတာဟာ မြန်မာပြည်ရဲ့ အလယ်ဗဟိုကျကျ တောင်ငူမြို့အနီးမှာ ရှိနေတာမို့ K.I.A နဲ့ စစ်ဆင်ရေး ဆင်နွဲခဲ့ရင် အချိန်မရွေး ဆွဲတင်လို့ရအောင် အပေါ်ကို ဆွဲကပ်ထားတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ ကေအန်ယူနဲ့ ဆွေးနွေးပွဲအဆင်မပြေခဲ့ရင်တော့ အောက်မြန်မာပြည်ပိုင်းကို ပြန်သုံးလို့ရအောင်လည်းစိတ်ကူထားတဲ့ပုံဘဲဗျ။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့နေရာက အောက်မြန်မာပြည်မှာ ဖေါင်ကြီးလိုနေရာမျိုး လေ့ကျင့်ခိုင်းလို့ ရရဲ့သားနဲ့ မြန်မာပြည်အလယ်ပိုင်း အုတ်တွင်းသို့ ဆွဲတင်သွားတာ K.I.A ကို ရည်ရွယ်တာဟုတ်တယ်။ ”
တပ်မတော်ရဲ့ ဗိုလ်ချုပ်များ လုပ်လေ့လုပ်ထရှိတဲ့ မဟာဗျူဟာ နည်းဗျူဟာ ဓလေ့စရိုက်များကို တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ ကြိုတင်သိရှိလေ့လာ ပြင်ဆင်နိုင်ဖို့ တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Last Updated ( Wednesday, 03 April 2013 16:34 )